ị bụ ebe a: Home ihu Ọgwụ Makeup aja aja ntutu anya
Ka ịmepụta a ikpọ na ndị mara mma image, ị ga-aṅa ntị n'ihe buo ibu dị iche iche nuances. Onye ọ bụla maara, na etemeete kwesịrị kwekọrọ na agba na ụdị akpụkpọ anụ, ntutu na uwe, nakwa dị ka ngwa mma na ọbụna ndị dị otú ahụ yiri eleda ke akpa ilekiri, nkọwa, dị ka ntu Polish na ọla. Ma ihe kacha mkpa, ihe kwesịrị ịbụ n'ụzọ zuru okè kwesịrị ekwesị anam-elu - na ọ bụ ntutu agba. Nwe blond curls, ndị kasị Ugboro agba ntutu, ọ dịkwa mkpa na-ege ntị atụ aro nke ndị ọkachamara anam-elu artists, na-enwe ike ike a mara mma ma ikpọ Anya anam-elu blond ntutu n'ụlọ.
Natural etemeete n'ihi na aja aja ntutu
A nhọrọ meykapa tumadi zubere maka ụmụ agbọghọ, na ọchịchịrị ma ọ bụ tanned akpụkpọ. Ka ịmepụta mkpa iji a pensụl ma ọ bụ shades nke ọlaedo-aja ndò, nke a ga-ahọrọ ihie, na ndabere nke akpụkpọ swarthiness: na darker ikpa, na chawapụrụ na agba ga-họọrọ. Golden etemeete mma n'anya ezi akara a ga-ekesa tinyere adịghị mma akara, nke ga-ike a eke na unobtrusive ụzọ. Nku anya na nke a n'onwe, a nta tint nke aja aja ink, na itinye a moisturizing egbugbere ọnụ balm ma ọ bụ doo anya gloss. Ma site na ime ihiere mma ghara ịda mbà.
General atụ aro
N'agbanyeghị nke ntutu agba bụ fọrọ nke nta mgbe Anya anam-elu blond ntutu nwere ike ịgụnye ojiji nke anwụrụ onyinyo. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị nwe blond curls-atụ aro iji matte lipstick na onyinyo. Ị na-ahọrọ a ndò nke lipstick na pearl shades, ọ dị mkpa ọma mbanye nhọrọ nke na agba.
Ọzọkwa, ichefu na, na ntọ-ala nke ọ bụla elu-edu anam-elu - na ọ bụ mma-njikere akpụkpọ, agba nke nke a ga-kwekọọ na-enyemaka nke ntọala, concealer na powder. The ụmụ agbọghọ na a icha mmirimmiri anụ ahụ odidi zuru okè ntọala ndo ọdụ, na beauties, nke koodu nke agba dị oji karịa bụ mma iji peach ma ọ bụ na agba aja aja creams.
N'ihi ya, arụ ọrụ na ihe e kere eke nke a anam-elu, Ìhè Brown ụmụ agbọghọ na-adịghị na unconditionally na-erubere iwu na ụkpụrụ nduzi. Ike na-Nnwale ahụ mgbe niile, isi ihe - echefukwala banyere nkịtị uche na ntị ka gị onwe gị na style.
Eme na-elu maka anya n'egbugbere ọnụ